Sao famindrana fahefana… hanao kolikoly | NewsMada
Sao famindrana fahefana… hanao kolikoly
Anisan’ny mampikaikaika ny maro amin’ny fitondrana ny kolikoly. Farany teo, ny amin’ny fampandaniana ny lalàm-pifidianana… nampiady. Nandray kolikoly 50 tapitrisa Ar isan-dohany ireo depiote manohana ny fitondrana? Tsy nitory ireo afa-baraka, na nisy nampiaka-peo aza fa hanao izany raha tsy hita porofo ny kolikoly.
Tsy famohazana fota-mandry: ny natao omaly no nahatonga ny anio ary handrafitra ny rahampitso. Aiza ho aiza? Noho ny fisian’ny kolikoly hoe avo lenta, mahazo vahana hatrany ny tsimatimanota: misy mpiaro, mpiray tsikombakomba. Hanao ahoana izany amin’izao hoe fanovana izao? Eny, na fifidianana aza no hoe mahamaika.
Aiza ho aiza, ohatra, izay tena ady amin’ny kolikoly? Na izay mety ho vokany, raha misy. Ho vitavita sy tsy hitahita ho azy ireo be kolikoly? Madiva hifarana izao ny fe-potoam-piasana. Mbola afa-manadio sy mandamin-trano? Misy aza ny efa madio rano nitana noho izao toe-draharam-pirenena izao, na fantatra aza ny nataony.
Ahoana ny tena fampiharan-dalàna amin’ny ady amin’ny kolikoly? Mba efa miasa sy ahitam-bokatra koa ireo karazan-drafitra amin’izany. Sao fampandriana adrisa ihany ny raharaha? Na izay be resaka ny amin’izany no tena loza amin’ny fanaovana kolikoly… Tsy hita tsinona izay tena vokatra mivaingana amin’ny fihazana “trondro vaventy”.
Tena atao sy vaindohan-draharaha ny ady sa… ? Fialokalofana sy fanamarinan-tena hoe efa mihetsika ny tena ny karazan-dalàna hatramin’izay? Ho afa-maina amin’izao, ohatra, ireo manankarena tampoka amin’ny kolikoly tamin’ny fampiasana fahefam-panjakana, na nisy aza ny fanaovana fanambaram-pananana? Tsy misy arakaraka.
Tsy mahagaga raha manjaka ny tsy fanarahan-dalàna. Tsy misy ohatra hotahafina. Ho an’ny hafa hatrany ny lalàna, fa misy ny ambonin’ny lalàna. Ny fanitsakitsahana izany aza no mampatanjaka azy… manao izay tiany hatao? Mby amin’ny ohabolana latinina hoe: “Be loatra ny lalàna rehefa be kolikoly ny fanjakana.”
Ndrao famindrana na fanohizana fahefana… manao kolikoly no hatao? Tsy misy fanenjehana na fanasaziana tsinona izay nahavita be teo aloha.